ဗကသ ဒုဥက္ကဋ္ဌဟောင်း ကိုလင်းထက်နိုင် (၂၀၁၆ ဧပြီ ၄ ရက်နေ့)
ဗမာနိုင်ငံလုံးဆိုင်ရာ ကျောင်းသားသမဂ္ဂများအဖွဲ့ချုပ် (ဗကသ)ဒုဥက္ကဌဟောင်း ကိုလင်းထက်နိုင်ကို ရန်ကုန်တိုင်း ကျောက်တံတားတရားရုံးကနေ ပုဒ်မ ၄၆၈ စွဲချက်နဲ့ သြဂုတ်လ ၂၆ ရက်နေ့က ထောင်ဒဏ် ခြောက်လ ချမှတ်လိုက်ပါတယ်။
လေးနှစ်ကြာ စစ်ဆေးလာတဲ့ ဒီအမှုရဲ့ စီရင်ချက်ကိုကြည့်ရင် ပြစ်ဒဏ်နဲ့ ပြစ်မှု တရားမျှတမှုမရှိ ဘူးလို့ အကျိုးဆောင်ရှေ့နေ ဦးသိန်းသန်းဦးက ဗွီအိုအေကို ပြောပါတယ်။
ဆက်သွယ်မေးမြန်းထားတဲ့ မအင်ကြင်းနိုင်က အကြောင်းစုံတင်ပြမှာပါ။
၂၀၁၅ခုနှစ်ပညာရေးသပိတ် ပင်မစစ်ကြောင်း ဦးဆောင်လာတဲ့ ဗကသ ခေါင်းဆောင်တဦးဖြစ်တဲ့ ကိုလင်းထက်နိုင် ခေါ် James ဟာ အဲဒီနှစ် မတ်လ ၁၀ ရက်နေ့မှာ အကြမ်းဖက် ဖမ်းဆီး ခံရအပြီး ကျောင်းသား သပိတ် နဲ့ဆက်စပ်တဲ့ နိုင်ငံရေးပုဒ်မတွေနဲ့အတူ သူ့ကို ဖမ်းဆီးချိန် အိတ်ထဲမှာ သူ့မှတ်ပုံတင်နဲ့အခြားသူတဦးရဲ့ မှတ်ပုံတင် ကိုတွေ့ရှိခဲ့တဲ့အတွက် မှတ်ပုံတင်အတုပြုလုပ်မှု ပုဒ်မ ၄၆၈ နဲ့ပါ စွဲချက်တင် ဖမ်းဆီးခံခဲ့ရတာပါ။
၂၀၁၆ခုနှစ် NLD အစိုးရတက်လာချိန်မှာ သမ္မတ ဦးထင်ကျော်ရဲ့ လွတ်ငြိမ်းချမ်းသာခွင့်နဲ့ သပိတ်ထဲပါဝင်ခဲ့တဲ့အမှုနဲ့ ဖမ်းဆီးတရားစွဲထားတဲ့ ဆန္ဒပြ ကျောင်းသားခေါင်းဆောင်တွေ၊ ကျောင်းသူကျောင်းသားတွေကို ပြန်လွှတ်ပေးခဲ့ပြီးနိုင်ငံရေးပုဒ်မစွဲချက်တွေကို ရုပ်သိမ်းပေးခဲ့တာပါ။ ဒါပေမဲ့ ကိုလင်းထက်နိုင်ကို စွဲထားတဲ့ ပုဒ်မ ၄၆၈ က ကျန်ခဲ့တဲ့အတွက် ဒီအမှုကို လေးနှစ်ကြာ ရန်ကုန် ကျောက်တံတားတရားရုံးမှာ ရင်ဆိုင်ခဲ့ရတယ်လို့ ဇနီးဖြစ်သူ ဗကသ ကျောင်းသားခေါင်းဆောင်ဟောင်း မဖြိုးဖြိုးအောင်က ဗွီအိုအေကို ပြောပါတယ်.
“၄ နှစ်ကျော်လာပြီပေါ့နော် ဒီအမှုနဲ့ ဆက်ပြီးတော့ ကြာနေတယ်။ အဲဒီအမှုကိုလည်း မျိုးစုံပေါ့နော်။ ကြားထဲမှာလည်း တရားလိုဖြစ်တဲ့ လ၀က (လူဝင်မှုကြီးကြပ်ရေး) ဘက်ကလည်း သေသေချာချာလာထွက်တာ မဟုတ်ဘူး။ တရားလိုလာဖို့ကိုလည်း အကြိမ်ကြိမ်ခေါ်ရတာမျိုး စသဖြင့်ပေါ့နော်။ တရားရုံးမှာ ပစ်ထားတဲ့ အမှုတခုလိုဖြစ်ခဲ့တာပါ။ ဆိုတော့ ဒီကြားထဲမှာလည်း ကျမတို့ဘက်က သက်ဆိုင်ရာ အာဏာပိုင်တွေဆီကို စာတင်တာတို့ ဘာတို့ရှိခဲ့တယ်ပေါ့နော်။ ဒီအမှုက ၂/၂၀၁၆ အရ ပတ်သိမ်းရမယ့်အမှုဖြစ်တယ်။ နောက်တခုက ရဲစခန်းက ရဲကိုယ်တိုင်က ၂/၂၀၁၆ ဖြစ်တဲ့အတွက် ပိတ်သိမ်းမယ့် အမှုဖြစ်ပါတယ် ဆိုတဲ့ ပေးပို့တဲ့စာတွေလည်း ကျမတို့မှာ မှတ်တမ်းတွေလည်း ရှိနေတယ်ပေါ့နော်။ ဆိုတော့ အဲဒါကိုလည်း ကျမတို့ တောက်လျှောက်ကြိုးစားခဲ့ပေမယ့် နောက်ဆုံးကတော့ ဒီအမှုနဲ့ အပြစ်ရှိကြောင်းတွေ့ရှိတယ်ဆိုပြီးတော့ တရားသူကြီးက ခြောက်လ ချလိုက်တယ်ပေါ့နော်။”
ကျောက်တံတားတရားရုံး တရားသူကြီးရဲ့ စီရင်ချက်ကိုကြည့်ရင်ပြစ်ဒဏ်နဲ့ ပြစ်မှု ဟာ မျှတမှုမရှိဘူးလို့ ကိုလင်းထက်နိုင်အမှုကို လိုက်ပါဆောင်ရွက်နေတဲ့ ရှေ့နေအဖွဲ့ခေါင်းဆောင် လူ့အခွင့်အရေး ရှေ့နေ ဦးသိန်းသန်းဦးက ဗွီအိုအေကို ပြောပါတယ်။
“ James ကို အဲဒီကိစ္စနဲ့ တရားစွဲထားတဲ့အချိန်မှာ ဒါတွေနဲ့ ပတ်သက်ပြီးတော့ နိုင်ငံတော် သမ္မတကနေ လွတ်ငြိမ်းချမ်းသာခွင့်ရပြီးသာဖြစ်တယ်။ ရပြီးသာဖြစ်တော့ ဒီအခြေအနေမှာ ဥပဒေအရပြောရရင် ပုဒ်မ ၄၆၈ က အတုဖန်တီးတာပေါ့နော်။ အဲဒီလိုမျိုးအမှုကို ရုပ်သိမ်းကျေအေးခွင့်မရှိဘူး။ ရုပ်သိမ်းလို့မရတဲ့ အမှုမျိုးဖြစ်နေလို့ ။ ဥပဒေအရ ပြစ်မှုထင်ရှားတာက မှန်တယ်လို့ ကျနော် ရိုးရိုးသားသားပြောပါ့မယ်။ သို့ရာတွင် ပြစ်ဒဏ်နဲ့ ပြစ်မှုက မမျှတဘူး ။ ဒီကလေးတွေ ဒါကိုလုပ်ခဲ့တဲ့ ခေတ်အခြေအနေပေါ့နော် ၊ အင်မတန်မှ အမှောင်ခေတ်ကြီးမှာ ကြုံနေရတော့ ကြုံသလို အထောက်အထားအဖြစ် သုံးခဲ့တာကတော့ မှန်တယ်။ ဒါပေမယ့် ၆ လဆိုတဲ့ ပြစ်ဒဏ်ကတော့ များလွန်းအားကြီးပါတယ်။ ကျောင်းသားလူငယ်လေးတယောက်ကို ဒါက သူ့ကိုမတော်မတရားလုပ်တာ။ ဒီမှတ်ပုံတင်အတုလုပ်ပြီးတော့ ကာယကံရှင်ကို နစ်နာ သွားအောင်လည်းလုပ်တာမဟုတ်ဘူး။ အခြားရည်ရွယ်ချက်မပါပဲနဲ့ သူဝရမ်းပြေးဘ၀မှာ သူကိုင်စရာမရှိလို့ ကိုင်ခဲ့တဲ့အနေအထားဖြစ်တော့ ပြစ်ဒဏ်ကတော့ များတယ်။ ကျနော်တို့ အဲဒီအတွက် အယူခံတက်ပါမယ်။”
အခုလို တိုက်ရိုက်စစ်တပ်အုပ်ချုပ်မှုကနေ အပြောင်းအလဲ ဖြစ်မဖြစ် စမ်းသပ်မယ့် ရွေးကောက်ပွဲနီးနေတဲ့ အချိန်ကာလလည်းဖြစ် ကိုရိုနာဗိုင်းရပ်စ်ကူးစက်မှု အန္တရာယ်ရှိနေတဲ့ အချိန်မှာ ကိုလင်းထက်နိုင်လို နိုင်ငံရေးအရ လှုပ်ရှားတက်ကြွသူတဦးကို ပြစ်ဒဏ်နဲ့ ပြစ်မှု မမျှအောင် ထောင်ဒဏ်စီရင်ချက် ချမှတ်တာဟာ မြန်မာနိုင်ငံမှာဥပဒေကို အသုံးချပြီး နိုင်ငံရေးအရပါ ဖိနှိပ်နေတယ်ဆိုတာ သက်သေပြနေတယ်လို့ မဖြိုးဖြိုးအောင်ကပြောပါတယ်။
“ကျမအမြင်အရဆိုရင်လည်း ဒီအမှုက ထောင်ချောက်ဆင်ခဲ့တဲ့အမှုလို့ ကျမမြင်တယ်။ ဦးသိန်းစိန်လက်ထက်တုန်းက ထောင်ချောက်ဆင်ခဲ့တဲ့အမှုကို တမင်ရည်ရွယ်ချက်ရှိရှိ ချန်ထားခဲ့တဲ့ အမှုဖြစ်တယ်။ ဆိုတော့ ရည်ရွယ်ချက်ရှိရှိ ချန်ထားခဲ့တဲ့အမှုကို အဲဒီထောင်ချောက်ထဲကို ၀င်သွားတယ်လို့ပဲ မြင်တယ်။ အခုလက်ရှိဖြစ်စဉ်ကိုပေါ့နော်။ ဆိုတော့ တကယ်တမ်းပြောရရင် နိုင်ငံရေးအရကိုက မကောင်းဘူး ။ နိုင်ငံရေးအရ ဖိနှိပ်တဲ့ နိုင်ငံရေးပုဒ်မတင်မကပဲနဲ့ အခြားရာဇ၀တ်မှု ပုဒ်မတွေပါ သုံးပြီးတော့ နိုင်ငံရေးအရ ဖိနှိပ်လို့ရတယ်ဆိုတာကို သက်သေပြနေပါတယ်။ ထောင်ချောက်တွေ အများကြီးရှိတယ် အဲဒီထောင်ချောက်တွေထဲ နင်းမိတဲ့အခြေအနေမျိုးက နိုင်ငံရေး အရ အင်မတန် အန္တရာယ်ရှိတယ်လို့ ကျမမြင်ပါတယ်။”
လက်ရှိရန်ကုန် အင်းစိန်အကျဉ်းထောင်မှာ ထိန်းသိမ်းထားတဲ့ ကျောင်းသားခေါင်းဆောင်းဟောင်း နိုင်ငံရေးလှုပ်ရှားတက်ကြွသူ ကိုလင်းထက်နိုင်ရဲ့ အမှုနဲ့ ပတ်သက်လို့ တလအတွင်း အယူခံဝင်သွားမယ်လို့ သူ့ရဲ့ ရှေ့နေအဖွဲ့က ဗွီအိုအေကိုပြောပါတယ်။ ကိုလင်းထက်နိုင်ဟာ ၂၀၁၅ခုနှစ်က အမေရိကန်သမ္မတဟောင်း George W. Bush ရဲ့ Bush Institute က မြန်မာလူငယ်တွေအတွက် စီစဉ်တဲ့ လွတ်လပ်မှုနဲ့ ခေါင်းဆောင်မှုဆိုင်ရာ အစီအစဉ်မှာ ဂုဏ်ပြု ချီးမြှင့်ခံရထားရသူဖြစ်ပါတယ်။
ဗကသ ဒုဥက်ကဋ်ဌဟောငျး ကိုလငျးထကျနိုငျကို ထောငျဒဏျ (၆)လ ခမြှတျ
ဗမာနိုငျငံလုံးဆိုငျရာ ကြောငျးသားသမဂ်ဂမြားအဖှဲ့ခြုပျ (ဗကသ)ဒုဥက်ကဌဟောငျး ကိုလငျးထကျနိုငျကို ရနျကုနျတိုငျး ကြောကျတံတားတရားရုံးကနေ ပုဒျမ ၄၆၈ စှဲခကျြနဲ့ သွဂုတျလ ၂၆ ရကျနကေ့ ထောငျဒဏျ ခွောကျလ ခမြှတျလိုကျပါတယျ။
လေးနှဈကွာ စဈဆေးလာတဲ့ ဒီအမှုရဲ့ စီရငျခကျြကိုကွညျ့ရငျ ပွဈဒဏျနဲ့ ပွဈမှု တရားမြှတမှုမရှိ ဘူးလို့ အကြိုးဆောငျရှနေ့ေ ဦးသိနျးသနျးဦးက ဗှီအိုအကေို ပွောပါတယျ။
ဆကျသှယျမေးမွနျးထားတဲ့ မအငျကွငျးနိုငျက အကွောငျးစုံတငျပွမှာပါ။
၂၀၁၅ခုနှဈပညာရေးသပိတျ ပငျမစဈကွောငျး ဦးဆောငျလာတဲ့ ဗကသ ခေါငျးဆောငျတဦးဖွဈတဲ့ ကိုလငျးထကျနိုငျ ချေါ James ဟာ အဲဒီနှဈ မတျလ ၁၀ ရကျနမှေ့ာ အကွမျးဖကျ ဖမျးဆီး ခံရအပွီး ကြောငျးသား သပိတျ နဲ့ဆကျစပျတဲ့ နိုငျငံရေးပုဒျမတှနေဲ့အတူ သူ့ကို ဖမျးဆီးခြိနျ အိတျထဲမှာ သူ့မှတျပုံတငျနဲ့အခွားသူတဦးရဲ့ မှတျပုံတငျ ကိုတှရှေိ့ခဲ့တဲ့အတှကျ မှတျပုံတငျအတုပွုလုပျမှု ပုဒျမ ၄၆၈ နဲ့ပါ စှဲခကျြတငျ ဖမျးဆီးခံခဲ့ရတာပါ။
၂၀၁၆ခုနှဈ NLD အစိုးရတကျလာခြိနျမှာ သမ်မတ ဦးထငျကြျောရဲ့ လှတျငွိမျးခမျြးသာခှငျ့နဲ့ သပိတျထဲပါဝငျခဲ့တဲ့အမှုနဲ့ ဖမျးဆီးတရားစှဲထားတဲ့ ဆန်ဒပွ ကြောငျးသားခေါငျးဆောငျတှေ၊ ကြောငျးသူကြောငျးသားတှကေို ပွနျလှတျပေးခဲ့ပွီးနိုငျငံရေးပုဒျမစှဲခကျြတှကေို ရုပျသိမျးပေးခဲ့တာပါ။ ဒါပမေဲ့ ကိုလငျးထကျနိုငျကို စှဲထားတဲ့ ပုဒျမ ၄၆၈ က ကနျြခဲ့တဲ့အတှကျ ဒီအမှုကို လေးနှဈကွာ ရနျကုနျ ကြောကျတံတားတရားရုံးမှာ ရငျဆိုငျခဲ့ရတယျလို့ ဇနီးဖွဈသူ ဗကသ ကြောငျးသားခေါငျးဆောငျဟောငျး မဖွိုးဖွိုးအောငျက ဗှီအိုအကေို ပွောပါတယျ.
“၄ နှဈကြျောလာပွီပေါ့နျော ဒီအမှုနဲ့ ဆကျပွီးတော့ ကွာနတေယျ။ အဲဒီအမှုကိုလညျး မြိုးစုံပေါ့နျော။ ကွားထဲမှာလညျး တရားလိုဖွဈတဲ့ လဝက (လူဝငျမှုကွီးကွပျရေး) ဘကျကလညျး သသေခြောခြာလာထှကျတာ မဟုတျဘူး။ တရားလိုလာဖို့ကိုလညျး အကွိမျကွိမျချေါရတာမြိုး စသဖွငျ့ပေါ့နျော။ တရားရုံးမှာ ပဈထားတဲ့ အမှုတခုလိုဖွဈခဲ့တာပါ။ ဆိုတော့ ဒီကွားထဲမှာလညျး ကမြတို့ဘကျက သကျဆိုငျရာ အာဏာပိုငျတှဆေီကို စာတငျတာတို့ ဘာတို့ရှိခဲ့တယျပေါ့နျော။ ဒီအမှုက ၂/၂၀၁၆ အရ ပတျသိမျးရမယျ့အမှုဖွဈတယျ။ နောကျတခုက ရဲစခနျးက ရဲကိုယျတိုငျက ၂/၂၀၁၆ ဖွဈတဲ့အတှကျ ပိတျသိမျးမယျ့ အမှုဖွဈပါတယျ ဆိုတဲ့ ပေးပို့တဲ့စာတှလေညျး ကမြတို့မှာ မှတျတမျးတှလေညျး ရှိနတေယျပေါ့နျော။ ဆိုတော့ အဲဒါကိုလညျး ကမြတို့ တောကျလြှောကျကွိုးစားခဲ့ပမေယျ့ နောကျဆုံးကတော့ ဒီအမှုနဲ့ အပွဈရှိကွောငျးတှရှေိ့တယျဆိုပွီးတော့ တရားသူကွီးက ခွောကျလ ခလြိုကျတယျပေါ့နျော။”
ကြောကျတံတားတရားရုံး တရားသူကွီးရဲ့ စီရငျခကျြကိုကွညျ့ရငျပွဈဒဏျနဲ့ ပွဈမှု ဟာ မြှတမှုမရှိဘူးလို့ ကိုလငျးထကျနိုငျအမှုကို လိုကျပါဆောငျရှကျနတေဲ့ ရှနေ့အေဖှဲ့ခေါငျးဆောငျ လူ့အခှငျ့အရေး ရှနေ့ေ ဦးသိနျးသနျးဦးက ဗှီအိုအကေို ပွောပါတယျ။
“ James ကို အဲဒီကိစ်စနဲ့ တရားစှဲထားတဲ့အခြိနျမှာ ဒါတှနေဲ့ ပတျသကျပွီးတော့ နိုငျငံတျော သမ်မတကနေ လှတျငွိမျးခမျြးသာခှငျ့ရပွီးသာဖွဈတယျ။ ရပွီးသာဖွဈတော့ ဒီအခွအေနမှော ဥပဒအေရပွောရရငျ ပုဒျမ ၄၆၈ က အတုဖနျတီးတာပေါ့နျော။ အဲဒီလိုမြိုးအမှုကို ရုပျသိမျးကအြေေးခှငျ့မရှိဘူး။ ရုပျသိမျးလို့မရတဲ့ အမှုမြိုးဖွဈနလေို့ ။ ဥပဒအေရ ပွဈမှုထငျရှားတာက မှနျတယျလို့ ကနြျော ရိုးရိုးသားသားပွောပါ့မယျ။ သို့ရာတှငျ ပွဈဒဏျနဲ့ ပွဈမှုက မမြှတဘူး ။ ဒီကလေးတှေ ဒါကိုလုပျခဲ့တဲ့ ခတျေအခွအေနပေေါ့နျော ၊ အငျမတနျမှ အမှောငျခတျေကွီးမှာ ကွုံနရေတော့ ကွုံသလို အထောကျအထားအဖွဈ သုံးခဲ့တာကတော့ မှနျတယျ။ ဒါပမေယျ့ ၆ လဆိုတဲ့ ပွဈဒဏျကတော့ မြားလှနျးအားကွီးပါတယျ။ ကြောငျးသားလူငယျလေးတယောကျကို ဒါက သူ့ကိုမတျောမတရားလုပျတာ။ ဒီမှတျပုံတငျအတုလုပျပွီးတော့ ကာယကံရှငျကို နဈနာ သှားအောငျလညျးလုပျတာမဟုတျဘူး။ အခွားရညျရှယျခကျြမပါပဲနဲ့ သူဝရမျးပွေးဘဝမှာ သူကိုငျစရာမရှိလို့ ကိုငျခဲ့တဲ့အနအေထားဖွဈတော့ ပွဈဒဏျကတော့ မြားတယျ။ ကနြျောတို့ အဲဒီအတှကျ အယူခံတကျပါမယျ။”
အခုလို တိုကျရိုကျစဈတပျအုပျခြုပျမှုကနေ အပွောငျးအလဲ ဖွဈမဖွဈ စမျးသပျမယျ့ ရှေးကောကျပှဲနီးနတေဲ့ အခြိနျကာလလညျးဖွဈ ကိုရိုနာဗိုငျးရပျဈကူးစကျမှု အန်တရာယျရှိနတေဲ့ အခြိနျမှာ ကိုလငျးထကျနိုငျလို နိုငျငံရေးအရ လှုပျရှားတကျကွှသူတဦးကို ပွဈဒဏျနဲ့ ပွဈမှု မမြှအောငျ ထောငျဒဏျစီရငျခကျြ ခမြှတျတာဟာ မွနျမာနိုငျငံမှာဥပဒကေို အသုံးခပြွီး နိုငျငံရေးအရပါ ဖိနှိပျနတေယျဆိုတာ သကျသပွေနတေယျလို့ မဖွိုးဖွိုးအောငျကပွောပါတယျ။
“ကမြအမွငျအရဆိုရငျလညျး ဒီအမှုက ထောငျခြောကျဆငျခဲ့တဲ့အမှုလို့ ကမြမွငျတယျ။ ဦးသိနျးစိနျလကျထကျတုနျးက ထောငျခြောကျဆငျခဲ့တဲ့အမှုကို တမငျရညျရှယျခကျြရှိရှိ ခနျြထားခဲ့တဲ့ အမှုဖွဈတယျ။ ဆိုတော့ ရညျရှယျခကျြရှိရှိ ခနျြထားခဲ့တဲ့အမှုကို အဲဒီထောငျခြောကျထဲကို ဝငျသှားတယျလို့ပဲ မွငျတယျ။ အခုလကျရှိဖွဈစဉျကိုပေါ့နျော။ ဆိုတော့ တကယျတမျးပွောရရငျ နိုငျငံရေးအရကိုက မကောငျးဘူး ။ နိုငျငံရေးအရ ဖိနှိပျတဲ့ နိုငျငံရေးပုဒျမတငျမကပဲနဲ့ အခွားရာဇဝတျမှု ပုဒျမတှပေါ သုံးပွီးတော့ နိုငျငံရေးအရ ဖိနှိပျလို့ရတယျဆိုတာကို သကျသပွေနပေါတယျ။ ထောငျခြောကျတှေ အမြားကွီးရှိတယျ အဲဒီထောငျခြောကျတှထေဲ နငျးမိတဲ့အခွအေနမြေိုးက နိုငျငံရေး အရ အငျမတနျ အန်တရာယျရှိတယျလို့ ကမြမွငျပါတယျ။”
လကျရှိရနျကုနျ အငျးစိနျအကဉျြးထောငျမှာ ထိနျးသိမျးထားတဲ့ ကြောငျးသားခေါငျးဆောငျးဟောငျး နိုငျငံရေးလှုပျရှားတကျကွှသူ ကိုလငျးထကျနိုငျရဲ့ အမှုနဲ့ ပတျသကျလို့ တလအတှငျး အယူခံဝငျသှားမယျလို့ သူ့ရဲ့ ရှနေ့အေဖှဲ့က ဗှီအိုအကေိုပွောပါတယျ။ ကိုလငျးထကျနိုငျဟာ ၂၀၁၅ခုနှဈက အမရေိကနျသမ်မတဟောငျး George W. Bush ရဲ့ Bush Institute က မွနျမာလူငယျတှအေတှကျ စီစဉျတဲ့ လှတျလပျမှုနဲ့ ခေါငျးဆောငျမှုဆိုငျရာ အစီအစဉျမှာ ဂုဏျပွု ခြီးမွှငျ့ခံရထားရသူဖွဈပါတယျ။